"Uninzi lwaBomi, oMasters abaninzi" nguDkt. Brian Weiss: Uhlaziyo lweNcwadi
Incwadi eya kutshintsha Ubomi Bakho!
Ubomi abaninzi, i-Masters abaninzi ibali eliyinyani le-psychiatrist, isigulane sakhe esincinci, kunye nexesha elidlulileyo lobomi olutshintshile ubomi babo bobabini.
Njengengqondo yesintu, uDkt. Brian Weiss, MD, ophumelele uPhi Beta Kappa, magna cum laude, wase-Columbia University kunye neYale Medical School, wachitha iminyaka ekufundeni ngokucwangcisekileyo kwengqondo yengqondo, ukuqeqesha ingcinga yakhe njengososayensi kunye nodokotela .
Wayegxininisa ukuba ahlale engqondweni yakhe, engathembeli nantoni na engenakuzingqineka kwiindlela zenzululwazi zendabuko. Kodwa ngo-1980 wadibana nesigulane esineminyaka engama-27 ubudala, uCatherine, owafika eofisini yakhe efuna uncedo ekukhathazeni kwakhe, ukuhlaselwa kwexhala kunye ne-phobias. Ngokuqinisekileyo uDkt Weiss washaywa yinto eyenziwa kwiiseshoni zonyango kunye nokugqithwa kwakhe kwengqondo. Ngesihlandlo sokuqala, wahlangana ubuso nobuso nombono wokuphindukuzalwa kunye neentlobo ezininzi zobuHindu , okuthi, njengoko athi kwisahluko sokugqibela sencwadi, "Ndacinga nje ngamaHindu ... ayenze."
Kwiinyanga ezili-18, uDkt. Weiss wasebenzisa iindlela eziqhelekileyo zokonyango ukuze azame ukunceda uCatherine ukuba anqobe ubunzima bakhe. Xa kwakungekho nto ibonakala isebenza, wazama ukuxhomekeka, eyayiyifumene "isixhobo esihle kakhulu sokunceda isigulane sikhumbule iziganeko ezinokulibala. Akukho nto imfihlelo malunga nayo. Kuphela nje kwimeko yokugxininisa.
Ngaphantsi komyalelo we-hypnotist oqeqeshiwe, umzimba wesigulane uyaphinda uvuselele, kubangele ukuba imemori ikhulise ... ukukhumbuza iinkumbulo zeempawu ezide zikhohliwe eziphazamisa ubomi babo. "
Ngexesha leeseshoni zokuqala, ugqirha wagxotha uCatherine ukuba abuyele ebuntwaneni bakhe ebuntwaneni njengoko wayefuna ukukhupha imimandla ekhunjulwe yodwa.
Ukususela kwiminyaka emihlanu, umzekelo, uCatherine wayekhumbula ukugwinya kwamanzi kunye nokugubha xa ephoswa kwibhodi yokudibela ukuya echibini; ukususela kwiminyaka emithathu, inkumbulo kayise, ukuxiliswa kotywala, ukuhlambalaza ngobusuku obunye.
Kodwa yintoni eyayiza emva koko, yabetha abantu abathandabuzayo njengoDkt Weiss ukuba bakholelwe kwizinto ezigqithiseleyo kunye noko uShakespeare watshilo khona eHamlet (uMthetho wendawo yesi-5), "Kukhona izinto ezininzi ezulwini nasemhlabeni ... kunokuba ziphupha kwifilosofi yakho . "
Kuloluhlu lweemeko ezinjenge-trance, uCatherine uyakhumbula "izinto ezidlulileyo zeempilo eziye zabonakala ziyizinto ezibangelwa yinto ebangela ukuba ahlale ehlaselwa kunye neempawu zokuhlasela. Wayekhumbula "abahlala kumaxesha angama-86 kwisimo somzimba" kwiindawo ezahlukeneyo, zombini njengowesilisa nowesifazane. Wayekhumbula ngokucacileyo iinkcukacha zokuzalwa ngamnye - igama lakhe, intsapho yakhe, ukubonakala kwenyama, indawo - kunye nokubulawa kwakhe ngokubetha, ngokugwinya okanye ukugula. Kwaye ebomini bemihla ngemihla ufumana iziganeko ezininzi "ekwenzeni inkqubela ... ukuzalisekisa zonke izivumelwano kunye nazo zonke izikweletu zeKarmic ezimele."
Uthi uDkt Weiss wayemgxeka xa eqala ukuhambisa imiyalezo esuka "kwindawo ephakathi kwabantu," imiyalezo evela kwiMasters amaninzi (imiphefumlo eguqukileyo kakhulu engabonakaliyo emzimbeni) eyayineempawu eziphawulekayo malunga nentsapho yakhe kunye nendodana yakhe efile ukuba uCatherine bekungenakukwazi.
UDkt. Weiss wayevame ukuva izigulane zixoxa malunga namava okufa awakhupha kuwo emzimbeni wazo ofayo zikhokelela ekukhanyeni okumhlophe phambi kokuvuselela umzimba wazo. Kodwa uCatherine wabonakalisa ngakumbi. Njengoko ephuma emzimbeni wakhe emva kokufa kwakhe, wathi, "Ndiyazi ukukhanya okukhanyayo. Kuyamangalisa; ufumana amandla kulolu khanyiso. "Emva koko, ngelixa elinde ukuba aphinde azalwe kwi-state-life-life-state, wafunda ubulumko obukhulu kwi-Masters waza waba ngumzila wolwazi olungapheliyo.
Amazwi kaMoya oyiNgcwele
Nazi ezinye zeemfundiso ezivela kumazwi kaMoya oyiNgcwele:
"Umsebenzi wethu kukufunda, ukuba nguThixo-njengolwazi ... Ngokwazi sisondela kuThixo, kwaye ke siya kuphumla. Emva koko sibuyele ukufundisa nokunceda abanye. "
"Kuninzi oothixo, kuba uThixo unamnye wethu."
Kufuneka sibe "kwiiplanethi ezahlukeneyo ngamaxesha ahlukeneyo. Ngamnye umgangatho wokuqonda okuphezulu. Yiyiphi indiza esiya kuyo kuxhomekeke ekude siphumelele kangakanani. . . "U
"Masibelane ngolwazi lwethu nabanye abantu. Sonke sinamakhono ngaphezu kwezinto esizisebenzisayo. . . . kufuneka ukhangele iimpawu zakho. . . ukuba awunjalo, uhamba nabo kunye nobomi. . . xa usenza isigqibo sokuba unamandla okwaneleyo ukuqonda iingxaki zangaphandle, ngoko awusayi kubakho ebomini bakho obulandelayo. "
"Indlela yomntu wonke iyafana. Sonke sifanele sifunde izimo zengqondo xa sisesimo senyama. . . uthando, ithemba, ukholo, uthando. . . Simele sizazi zonke izinto kwaye sizazi kakuhle. "
"Yonke inamandla. . . Abantu banokubona kuphela ngaphandle, kodwa unokwenza unzulu. . . Ukuba kwisimo somzimba asiqhelekanga. Xa unesimo sokomoya esingokwemvelo kuwe. Xa sibuyiselwa emuva, kufana nokubuyiselwa kwinto esingaziyo. Kwihlabathi lomoya kufuneka ulinde, kwaye ke uhlaziywa. Ingumlinganiselo njengamanye amanqanaba ... "
"Uloyiko lokufa ... ukuba akukho mali okanye amandla angakwazi ukunciphisa" ... uhlala ngaphakathi kwethu. "Ukuba abantu babesazi ukuba ubomi buphela; ukuze singafi; Asizange sizalwe ngokwenene, loyiko luya kutshabalalisa. . . kunye nemimoya esisijikelezayo ukuze sincede ngexesha lisesimweni senyama nasemva kokufa, ngokomoya. "Thina kunye nabathandekayo bethu baya kuthi bajoyine le ngelosi.
"Izenzo zobundlobongela kunye nokungabi nabulungisa kubantu abangezixekwanga, kodwa zibuyiselwa ngenye indlela ebomini."
"Yonke into ifika xa kufuneka ifike. Ubomi abukwazi ukukhawuleza ... simele samukele oko kuza kuthi ngexesha elithile ... ubomi bupheli ... sidlula ngaphaya kwezigaba ezahlukeneyo. Akukho siphelo. Ixesha alikho njengoko sibona ixesha, kodwa kunokuba sifunde izifundo. "
Emva kokufa "sifika kwindiza engokomoya, siyaqhubeka sikhula apho, naye. Xa sifika, sitshiswa. Kufuneka siphume kwisigaba sokuhlaziya, isigaba sokufunda, kunye nesigaba sesigqibo. Siya kugqiba xa sifuna ukubuya, apho, kwaye zeziphi izizathu ... Umzi wethu uyisithuthi sethu ngelixa silapha. Umphefumlo wethu nomoya wethu ohlala ngonaphakade ... "
UDkt Weiss ukholelwa ukuba phantsi kwe-hypnosis, uCatherine wakwazi ukugxila kwingqalelo yengqondo yakhe engaphantsi kwengqondo, ekhunjulwayo, okanye mhlawumbi yayifakwe kwi-psychoanalyst uCar Jung eyayibiza ngokuba yi-Collective Unconscious, umthombo wamandla esisijikelezile esineenkcukacha zomhlaba wonke.
Ukuzalwa kwakhona kwiHindu
Amava kaDkt Weiss kunye nolwazi lukaCatherine lwe-transcendental lungavusa ukwesaba okanye ukungakholelwa kwintshona, kodwa kumaHindu umba wokuzalwa kwakhona, umjikelezo wobomi nokufa, kunye nolwazi oluvela kuThixo, lendalo. Ingcwele ye Bhagavad Gita kunye nezibhalo zakudala zeVedic ziquka konke oku bulumko, kwaye ezi mfundiso zenza iziqalo zokuqala zamaHindu. Ngako oko, ukuthetha kukaDkt Weiss kumaHindus kwisahluko sokugqibela sencwadi kuza njengamkelekileyo ukwalukelwa inkolo esele yavuma kwaye yamkela amava akhe afumaneka.
Ukuzalwa kwakhona kwiBuddhism
Umbono wokuzalwa kwakhona oqhelekileyo kumaBuddhist aseTibetan , nawo. Ubungcwele bakhe i-Dalai Lama, umzekelo, ukholelwa ukuba umzimba wakhe unjengengubo, leyo, xa ixesha lifika, uya kulahla aze aqhubeke nokuyamkela omnye. Uya kuphinda azalwe, kwaye kuya kuba ngumsebenzi wabafundi ukumfumana aze amlandele. NgamaBuddha ngokubanzi, inkolelo yekarma kunye nokuzalwa kwakhona ikwabelwana namaHindu.
Ukuzalwa kwakhona kwibuKristu
UDkt. Weiss ubonisa ukuba kukho ngokwenene ukubhekisela ekuzalweni kwakhona kwi-Old and New Testaments. I-Gnostics yokuqala-uClement wase-Aleksandriya, uOrigen, uSerome Jerome nabanye abaninzi-bakholelwa ukuba babephila ngaphambili kwaye babuya kwakhona. Ngo-325 CE, umbusi waseRoma uConstantine Omkhulu kunye no-Helena, unina, basusa iingxelo ngokuphindaphinda kwiTestamente Entsha, kwaye iBhunga lesiBili laseConstantinople lathembisa ukuphindwa kwakhona kwe-553 CE. Le yimizamo yokunciphisa amandla akhula eCawe ngokunika abantu ithuba elide lokufuna usindiso lwabo.
Ubomi abaninzi, i-Masters eninzi yenza ukufunda okungenakuphikiswa kwaye, njengoDkt Weiss, nathi siza saqonda ukuba "ubomi bugqithiseleyo kunokuba buhlangane neliso." Ubomi buhamba ngaphezu kweentsholongwane zethu ezintlanu.Qaphela ukufumana ulwazi olutsha kunye namava amatsha. kukufunda, ukuba nguThixo-njengolwazi. "
AmaHindu 4 amaYugas, okanye amaAgu
"Mangal Pandey - Ukunyuka" - Igalari yezithombe
I-8 Limbs & 4 Iintlobo ze-Yoga
I-Ekadasi i-Day Day ye-11 eyi-Auspicious ye-Lunar Cycle
Ikhalenda yamaHindu ihambelana njani neGregorian?
I-Namkaran Ngaba ngumkhosi wamaHindu obizwa ngokuba ngumHindu
Kutheni Nendlela Yokucamngca?
Yiyiphi i-Skateboarding Ndingayenza Xa iCold, Iza, i-Snowy ne-Winter?
Ukuqala iBusiness Craft Business
Isiqendu sesishwankathelo sixhenxe malunga noThebes ngu-Aeschylus
Quotes Day Day
Ukulungiswa kweTire: Ukupakisha nokuPhathisa
Iziseko zegrama: Iimpawu zezivakalisi kunye nezakhiwo zezivakalisi
IYunivesithi yaseMiami GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Iimbono zeBuddhist kwiNgxaki yokukhupha isisu
I-Mythology yamaYuda kwigazi le-HBO leNyaniso: Ngaba iLilith iVampire?
I-Mars e-Leo-Mars Signs
Iziphumo zonyulo lweMidrim
Ukunyuka kweNkosi yethu uYesu Kristu
Iisiseko zeenqwelo zeBhola kwiGalofu
Ngo-avril, ne-découvre pas de un fil: I-French to English Translation
Zingaphi I-Jedi Zasinda Kukhulu IJedi Purge?
Umhlahlandlela womculo weClassical Music Timeline
I-Acty Acid Definition
Ukucwina kwe-Arctic Steamship
Ubungqina Bokuba Ulungelelwano Olukhulu e-Yahtzee kwi-Roll Single